Umbhobho wentsimbi kunye neTyhubhu abavelisi - China Umbhobho wentsimbi kunye neTyhubhu ababoneleli kunye nefektri
Ingqele Itsalwe kumbhobho wentsimbi yeEcuador
Ingqele ityhubhu sentsimbi umbhobho luhlobo lombhobho wentsimbi, oko kukuthi, luhlelwa ngokweenkqubo ezahlukeneyo zemveliso, eyahlukileyo kumbhobho oshushu (owandisiweyo) oshushu. Kwinkqubo yokwandisa ububanzi bepayipi engenanto okanye umbhobho wezinto eziluhlaza, uninzi lweenkqubo zokuzoba ezibandayo zenziwa. Ukuchaneka kunye nomgangatho womhlaba ngokucacileyo uphezulu kunalawo ashushu asongwe ngombhobho wentsimbi, kodwa ngenxa yezithintelo zetekhnoloji, ububanzi kunye nobude bayo bunqunyelwe kwinqanaba elithile.
Umbhobho oShushu oShushu oShushu
Hot liqengqiwe umbhobho sentsimbi ingenan-. Lothuli eshushu kuhambelana lothuli ebandayo, nto leyo yenziwa ngezantsi lobushushu recrystallization, ngelixa lothuli eshushu lwenziwa ngaphezu lobushushu recrystallization.